waa maxay veterinary faaidada uu leeyhay
Started by xaseey, 6 Oct 2015
aflixi aad ayaad umahdsantihin marwalba pagekina waan lasocdaaa wllhi aad ban uxiiseeya pageka barta facebuugana waan lasocdaa marwalba waa online hadane soo dhawayn wbgsn iyo caawimad laga helaa iyo casharada iyo suaalaha iyo jawabaha saacidaadina horay usii wada aflixi thanks
cabdi Aflixi Bar ama Baro hibo 1 other like this
​Waa Maxay veterinary?
Veterinary waa qayb ka mid ah medicine waxeeyna la tacaamushaa ka hortagid iyo daweeynta cudurada, disorder iyo dhaawacyada soo gaara Xoolaha (Xayawaanada) . Baaxada Xanaanada xoolaha waa eey balaadhantahay, waxeeyna dabooleeysaa dhamaan noocyada xoolaha hadeey ahaan lahaayeen Kuwa la dhaqdo(Rabaayad) iyo Duurjoogta.
Faa’iidada Veterinary ee Bulshada:
Dadka dhaqda xoolaha veterinary wuxuu u noqonayaa aasaasi oo hadii xoolihi eey dhaqanaayeen uu ka xanuunsado ama uu dhaawac soo gaaro qofka daweeyn lahaa waa qof soo bartay xanaanada xoolaha.
Dhinaca Kale Faa’iidada veterinary waxaa ka mid ah in xoolihi dawooyin lasiiyo taasoo keeneyso ineey yaraato cudurada eey xoolaha u soo gudbin lahaayeen dadka, Sidookale in xoolihi la dhaqanaayay eey noloshooda noqoneeyso mid la daryeelo taasna waxeey faa’ido ugu jirtaa dadka isticmaala caanaha, hilibaka xoolaha.
Aflixi Bar ama Baro feysal mursal fariida 2 others like this
aqli 2017 1
Masha allah aadbaan oga halay runti barnamish kan waa mid loo baahnaa su'aal? Cilmigan xolaha masoo galaa digaga hadii eey ayada xanuusato ma sidan oo kale ayaa loo dawenaa
cabdixafiid maxamad diyaar likes this
cawil cabdi 0
habke loo mudaa xoolaha
neefka xoolaha marku xanuusado maxa lagu garan karaa
cabdixafiid maxamad diyaar 0
waxa lagu garankara xumad badan iyo qufc iyo calamad kae
Go To Topic Listing Veterinary